dn300 carbon kuhlinzwa stainless esisangqa blind - China Hebei Jinmai Ivoti
dn300 carbon kuhlinzwa stainless esisangqa oyimfama
Esisangqa, ukufakwa ithafa ngamaso
2000 Ton / Iitoni Nyanga nganye ukuhlangabezana neemfuno zakho MAX
dn300 carbon kuhlinzwa stainless esisangqa eyimfama IN ibhokisi WITH / NGAPHANDLE PALLET OKANYE sidinga
thina nokuveliswa prefessional yokuyihlamba zentsimbi oluthambileyo kwakufanelekile kwiminyaka engaphezu kwama-17.
iimveliso zethu ukuthengisa kakuhle PHAKATHI EAST, EROMANIA, EPOLAND, INKOLISO EUROPE zaseCOUNTRY & Columbia, ECUADOR, OLONA LATIN AMERICE & SOUTH AMERICE zaseCOUNTRY.
umgca entsha imveliso zokusebenzisa kusinceda sikwazi ukwandisa ikhono imveliso ukuya 2000 iitoni ngenyanga nganye.
inkonzo nokulungileyo tenet.hope yethu yokuqala singaba kunye nabathengi kulo lonke ihlabathi elitsha kunyaka ka-2012.
28 amawaka square metres
Isefu & abamnyama oluthambileyo umbhobho yentsimbi isilinganisi
Ukufakwa zobuhlalu PLAIN
catons bagsin yeplastiki / ngaphandle pallet
Kuya kuba wethu omkhulu imbeko akunike ikowuteshini phezu r eceipt izidingo zakho eneenkcukacha.
Siyakholwa ukuba thina bantu okungcono ukuba ungasoloko ukwenza ngcono.
Next: kwizinga eliphezulu waphosa intsimbi umbhobho flanges, ensimbi amnyama umbhobho esisangqa kagesi
Rich Export Experience Low Ixabiso Isefu Plu ...
Ngqo Ukusuka Factory Isefu Metal Pipe esisangqa
Quality High yokusetyenziswa ngesinyithi Pipe Lokulinganisa ...
Hebei BS standard kumbhobho zentsimbi oluthambileyo cast fitt ...
Umthengisi intsimbi oluthambileyo esisangqa umenzi